You are at:Home»संगालाे»उपयोगी जानकारी»मनकामना र धार्मिक पहिचान
By HamroGorkha on	 December 7, 2018 उपयोगी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, जिल्ला जानकारी, धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु, पर्यटन, लेख रचना
जहाँ आस्था, श्रद्धा समर्पणको भाव रहन्छ त्यहाँ भगवानको उत्पत्ति हुन्छ । हाम्रो देशमा मनकामना यस्तै तीर्थस्थल हो। दिनमा हजाराैं मानिस त्यहाँ पुग्छन् र चेतन/अचेतन मनको कुनै कुनामा शायद श्रद्धा र समर्पण लिएर पुग्छन्। केही दिनअगाडि यस्तै भावना बोकेर म मनकामना मन्दिर पुगेंँ । यस्तै ३ घण्टाको उकालो १० मिनेटमा केवुलकारमा पार गरियो । मनकामनामा केबुलकारबाट उत्रिसकेपछि बाटैमा यो केवलकारका सर्जक लक्ष्मण बाबुको सालिक थियो। लक्ष्मणको सालिकलाई नमस्कार गरेँ। चिन्तक/सर्जक र उद्यमीहरूराष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । त्यो बेलामा लक्ष्मण बाबुले ठूलो जोखिम बोकेर लगानी गरे । त्यो सफल भयो र त्यसले यस्तै अन्य केवलकार निर्माणको नयाँक्षितिज खोलिदिएको छ।
मनकामना मन्दिरको पुनर्निर्माण झण्डै सकिएको छ । केवलकारको स्टेसनदेखि मन्दिरसम्मको बाटो सफा छ । नयाँ घर बनेका छन् । बाटोको दायाँबाँयाको पसलमा धर्म र अर्थको संगम जताततै स्पष्ट छ । मानव इतिहास हेर्ने हो भने श्रद्धा र समर्पणसँग अर्थ सँगै जोडिएरै रहेको छ । अनि अर्थसँग राजनीति जोडिन्छ भने धर्म–अर्थ–राजनीति एकै सिक्काका ३ अङ्ग हुन पुग्छन् । यीबीचको सम्बन्ध र संघर्ष नै मानव सभ्यताको महत्वपूर्ण इतिहास हुन आउँछ । यी तीनबीचको समन्वय र व्यवस्थापनसँग इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ठूला क्रान्ति, संघर्ष र वैचारिक रूपान्तरणका अध्याय जोडिएका छन् र राष्ट्रको निर्माण र विनास भएका छन् । यी सम्बन्ध आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि सान्दर्भिक छन् । यी सम्बन्धलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु हाम्रा लागि पनि अब आवश्यक भइसकेको छ।
मनकामनाको मन्दिरमा तराई–मधेसका नेपाली हुन् या पहाड र हिमालका नेपाली,सबै पुग्छन्। विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक एकतालाई यो तीर्थस्थलले बल दिएको छ।
दुई वर्षअगाडिको भूकम्पले मनकामना मन्दिरमा निकै क्षति पु-यायो तर अहिले पुनर्निर्माण भएको मन्दिर धार्मिक विधिअनुरूप उद्घाटन हुनमात्र बाँकी छ। मन्दिर पुजारी इन्सान थापा र पुनर्निर्माण समितिका सचिव प्रेमकुमारश्रेष्ठका अनुसार मन्दिरको पुनर्निर्माणका क्रममा छानामा सुनको जलप लगाइएको छ र भक्तपुरबाट कारिगारहरू लगेर सुन्दर काष्ठकलाका उत्कृष्ठ नमुनाहरू निर्माण गरिएको छ । खर्च भएको१५ करोड रुपियाँमध्ये ४ करोड नेपाल सरकारबाट दिइयो भने बाँकी रकम सबै चन्दाबाट उठेको छ । स्पष्ट छ– मनकामना भगवतीको मन्दिर हिन्दुु र बुद्ध धर्मावलम्वीको आस्था र श्रद्धाको केन्द्र हो।
मनकामना मन्दिरको कथा
मनकामना मन्दिर किन र कहिलेदेखि हाम्रो देश र विश्वका हिन्दुहरूका लागि श्रद्धा र समर्पणको स्थान बन्यो भन्ने इतिहास रोचक छ । मनकामना मन्दिरका पुजारी सिद्धलखन थापाका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा राम शाहको मनकामना नाम गरेकी रानी थिइन् । उनी साक्षात भगवतीको रूप थिइन् तर राजा र जनताका अगाडि उनी सामान्य महिला थिइन् । मनकामनामा ईश्वरीय यथार्थता गुरु गोरखनाथलाई थाहा थियो । यसै क्रममा गुरु गोरखनाथले मनकामनाका लागि शुद्ध चित्त भएको भक्त खोज्न थाले । यस्तो शुद्ध व्यक्ति खोज्दै जाँदा उनले दाउरा काटिरहेको लखन थापालाई भेटे । उसको निष्पक्ष सरलता देखेपछि गुरु गोरखनाथले उसलाई शिक्षा र ज्ञान दिए । यसपछि सामान्य व्यक्ति लखनथापा सिद्ध लखन थापा भए।
कालान्तरमा मनकामना देवीले यो संसार छाड्न लागेपछि सिद्ध लखन थापाले पनि देह छाड्ने इच्छा व्यक्त गरे । तर देवीले तिमी अहिले बस, म फेरिकुनै न कु्नै रूपमा प्रकट हुन्छु भनेपछि रोकिए । त्यसपछि आजको मनकामना मन्दिर भएको ठाउँमा आफ्नो खेत जोत्दा हलो ढुङ्गा फुटेर दूध निस्कियो । यो देखेपछि सिद्ध लखन थापा र सबै गाउँलेले यो मनकामना भगवतीको रूप भन्ने बुझी मन्दिर खडा गरे र लखन थापा पुजारी भई ध्यान गरे । उनै सिद्ध लखन थापाका सन्तानले त्यस समयदेखि मन्दिरको पुजारीको काम गरे र हालका पुजारी इन्सान थापा यही इतिहासको निरन्तरताका पात्र हुन्।
हाम्रो सनातन वैदिक धर्मको स्रोत र तीर्थस्थलहरूको समष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा नेपालको पहिचान वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र भनी घोषणा गर्न किन हिच्किचाउने ?
आज मनकामना भगवतीको मन्दिर हिन्दु–बौद्ध सबैको श्रद्धा र समर्पणको थलो भएको छ । यहाँबर्सेनि करिब १० लाख भक्तालु केवलकारबाट आउँछन् भने अर्को ३ लाख हिँडेर या गाडीमा आउँछन् । यसमध्ये ३ लाखभन्दा बढी भारतीय तीर्थयात्री हुन्छन् । भारतीय तीर्थयात्रीहरूको संख्या बढेर गएको छ भने प्रचार–प्रसार भए धेरै नै बढ्ने देखिन्छ।
मनकामनाको पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले गरेको छ । भक्तहरूको स्वेच्छाबाट रकम संकलन गरिएको पुनर्निर्माण कमिटीका सचिव प्रेम श्रेष्ठले बताए । मन्दिर र आसपासको क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको धेरै सभ्भावना छ तर यसका लागि केवलकार कम्पनी, सरकार र स्थानीय जनताको सहभागितामा ठोस योजना बनेको छैन।
हाम्रो देश हिन्दु र बुद्ध धर्मको स्रोत हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ऋषिमुनिहरू जब जीवन र मृत्युको अर्थ र यथार्थबारे चिन्तन गर्थे त्यसबखत उनीहरू हिमालयको काखमा रहेको नेपालमा आइपुग्थे । त्यसैले हाम्रो देश मानव जातिको ठूलो आध्यात्मिक थलो हो । महाभारत र रामायणका महत्वपूर्ण घटना यहीँ भएका छन् भने बुद्ध धर्मको सुरुवात पनि यहीँ ठाउँबाटै सुरु भएको हो । यो इतिहास र आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई पुरातन भनी सम्झने र जन्मदिनमा मन्दिरमा प्रार्थना गर्नुको सट्टा केक काट्ने र ‘भ्यालेन्टाएनडे’ मनाउनुलाई अग्रगमन सम्झने प्रवृत्ति पनि नेपालका ठालुहरूमा नदेखिएको होइन जुन आफैँमा लघुताभाषको चिह्न हो।
मनकामनाको मन्दिरमा तराई–मधेसका नेपाली हुन् या पहाड र हिमालका नेपाली,सबै पुग्छन् । विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक एकतालाई यो तीर्थस्थलले बल दिएको छ । यो यथार्थता हाम्रो धार्मिक पहिचान हो र यसलाई स्वीकार गरी हाम्रो संविधानमा ठाउँ दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन।
आजको नेपाल औपचारिकरूपमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सविधान र कानुनअनुसार चलेको छ । यस परिवेशमाहाम्रो सनातन वैदिक धर्मको स्रोत र तीर्थस्थलहरूको समष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा नेपालको पहिचान वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र भनी घोषणा गर्न किन हिच्किचाउने ? आजको नेपालको शासकीय पहिचान जनतामा निहित सार्वभौमिकताले निर्देश गर्छ भने नेपालको सांस्कृतिक पहिचान वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रमा अडेको छ । यस अर्थमा जनताको सार्वभौमिकता अडेको शासन व्यवस्था र वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको नेपाली पहिचान हाम्रो देशको एकता र अखण्डताका महत्वपूर्ण परिपुरक तत्व हुन् । यो तर्कलाई केही ‘अग्रगामी’ हरूले ‘पुरातनवादी र सामन्तवादी’ भनी आलोचना गरेका छन् । तर यो पहिचानको कुरा गर्दा संसारमा आज २६ राष्ट्र छन् जस्ले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान इसाई धर्मका रूपमा कुनै न कुनै रूपमा जोडेका छन् । उदाहरणका लागि स्विडेनको संविधानअनुुसार त्यहाँका राजा इसाई धर्म र त्यसमा पनि लुथरन सम्प्रदायको हुनैपर्छ । अझ बेलायतीहरू ‘चर्च अफ इङ्गल्यान्ड’ लाई बेलायतीको आधार र पहिचानका रूपमा लिन्छन्।
तर यही तर्क कसैले नेपालको सन्दर्भमा गरे त्यसलाई पुरातन भन्नु सिर्फ लघुताभाषमात्र हो । यथार्थता के हो भने नेपालको वैदिक सनातन हिन्दु पहिचानसँंग पश्चिमी राष्ट्रहरूभित्रका शासक र धार्मिक कट्टरपन्थीलाई नफरत छ । यही दृष्टिकोणलाई विभिन्न स्वार्थ र लोभको जालोमा नेपालका केही नेताले बोकेका छन् । त्यसैले नेपालमा कसैले हाम्रो देशको पहिचान सनातन वैदिक हिन्दु राष्ट्रभन्दा पुरातनवादी ठहरिन्छ तर बेलायतलगायत थुप्रै अन्य देशलेआफ्नो पहिचान इसाई राष्ट्रका रूपमा घोषणा गर्दा या कानुनमा व्यवस्था गर्दा त्यो अग्रगामी ठहरिन्छ । यो विरोधाभाष देख्न नसक्नु एक विडम्बना भएको छ।
वैदिक सनातन हिन्दुधर्मले एक ईश्वरवादको ठाउंँमा बहुईश्वरवाद मान्छ । त्यसै कारण यसको केन्द्रीकृत संगठन छैन र हुन पनि सक्दैन । बहुचिन्तन र बहुमार्गको आवधारणाका कारणहिन्दु धर्म विस्तारवादी हुन सक्तैन । यो गुण र लचकतालाई ग्रहण गरेर तथा यस क्रममा निस्केका कुरीति र विकृतिलाई निर्मूल पारेर विश्वका २०० करोड मानिसका लागि वैदिक सनातन हिन्दु पहिचानको उज्यालो ताराका रूपमा नेपाललाई उभ्याउनु हाम्रा लागि अग्रगामी कदम हो।
Previous Articleओल्ड क्यापिटलबाट हराएका दुई विधार्थी काठमाण्डौमा भेटिए
Next Article ग्रासुट फुटवल फेस्टिबल हुने